I-Studio Bahia Feliz, eGran Canaria - I-Airbnb
I-Studio Bahia Feliz, eGran Canaria
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uOlga iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Istudiyo esitofotofo eBahía Feliz
Ingcaciso yesiNgesi - ingcaciso yaseSpeyin ngezantsi
Estudio.loft eBahia Feliz iimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni. Iqaqambile, yindawo epholileyo kakhulu kunye namandla amahle okuvuselela, ukuphumla, ukuhamba elunxwemeni, ukutshona kwelanga, ukuphumla kwi-spa Orquidea, ukuhamba imizuzu eyi-5 okanye ukwenza imidlalo kwaye ubuye unengqondo ecacileyo emva kweentsuku ezingalibalekiyo.
Elunxwemeni lwaseBahia Feliz kukho neklabhu ye-windsurfing.
Isitudiyo sinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, i-wifi, i-tv, ikofu ye-nesspreso, izixhobo zasekhitshini, umatshini wokomisa iinwele, iitawuli nezinto zebhedi.
Kwaye ukuba kukho into ovakalelwa kukuba iyimfuneko, ndichazele, ndiza kukuvuyela ukuyikhuthaza.
Ungapaka esitratweni phambi kwesitudiyo lula kakhulu kwaye simahla. Bonke abantu abaye bathetha ngale ndawo ngefuthe labo eliguquguqukayo, yindawo elungiselelwe uxolo nothando. Ilungele abantu abathandanayo okanye umntu ofuna ukuba yedwa aze amamele.
Ukuma kwebhasi eBahia Feliz kwimizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwisifundo, ukongezelela, iinkonzo zebhasi zikudibanisa kwisikhululo seenqwelo-moya, iMaspalomas, iPlaya del Ingles, kunye nesixeko saseLas Palmas de Gran Canaria kunye nokunye.
Kwakhona imizuzu eyi-5 uhamba kwindawo entle kakhulu, ulandela umgca wezakhiwo wale ndawo, kunye neevenkile zokutyela, iivenkile, iikhefi, ibhari kunye neevenkile ezinkulu.
Indawo yeholide yaseBahia Feliz ithule kakhulu, ayihambi kangako, ihlanganisa ezona ndawo zintle zaseMzantsi weGran Canaria, ulwandle, ilanga, amaqondo obushushu afudumeleyo, ukuzola nobuhle bendawo eyakhiwe ngemibala yolwandle, eluhlaza lwengca kunye nemithi yesundu kunye nesandi solwandle kunye neentaka ezicula ngasemva.
Wamkelekile eBahia Feliz
Estudio.loft eBahia Feliz iimitha eziyi-200 ukusuka elunxwemeni. Iqaqambe, indawo epholileyo kakhulu kunye namandla amahle okuvuselela, ukuphumla, ukuhamba elunxwemeni, ukutshona kwelanga, ukuphumla kwi-Orquidea spa imizuzu eyi-5 yokuhamba okanye ukwenza imidlalo uze ubuyele engqondweni ecacileyo emva kweentsuku ezithile ezingalibalekiyo.
Elunxwemeni lwaseBahia Feliz uneklabhu ye-windsurfing.
Isitudiyo sinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu , umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wokomisa impahla, i-wifi, i-TV, umatshini wokwenza ikofu, izinto zasekhitshini, umatshini wokomisa iinwele, iitawuli nezinto zebhedi.
Kwaye ukuba kukho nantoni na ocinga ukuba iyimfuneko, ndichazele, ndiza kukuvuyela ukunceda.
Ungapaka esitratweni phambi kwesitudiyo lula kakhulu kwaye simahla. Bonke abantu abaye bayisebenzisa le ndawo bathetha ngezinto ezitshintshayo, yindawo elungiselelwe uxolo nothando. Ilungele isibini okanye umntu ofuna ukuba yedwa aze amamele omnye komnye.
Ukuma kwebhasi okudibanisa iBahía Feliz kunye nesikhululo seenqwelo-moya imizuzu emihlanu xa uhamba ngeenyawo ukusuka kwistudiyo , ukongezelela kwiinkonzo zebhasi ezikudibanisa neMaspalomas, iPlaya del Inglés, kunye nesixeko saseLas Palmas de Gran Canaria .etc.
Kwakhona uza kuhamba imizuzu eyi-5 ukuya kwivenkile entle kakhulu, ulandela umgca wezakhiwo wale ndawo, kunye neevenkile zokutyela, ezoshishino, iikhefi, ibhari kunye neevenkile ezinkulu.
Imeko yesixeko saseBahía Feliz ithule kakhulu, ayixakekanga kakhulu, idibanisa ezona ndawo zintle zaseMzantsi weGran Canaria, ulwandle, ilanga, amaqondo obushushu amahle, ukuzola nobuhle bendawo eyakhiwe ngemibala yolwandle, eluhlaza lwengca kunye nemithi yesundu kunye nesandi solwandle kunye neentaka ezicula ngasemva.
Wamkelekile kwi-Happy Bay!
4.73 · Izimvo eziyi-238
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Las Palmas